Yintoni iNtengiso eDityanisiweyo?
Ividiyo: Yintoni iNtengiso edityanisiweyo?
NgeCawa, ngoSeptemba 23, 2012 Lwesine, Okthobha 11, 2012 Douglas Karr
Sisoloko sinika ubungqina kubaxumi bethu ukuba intengiso yamajelo amaninzi yindlela efanelekileyo yokonyusa iziphumo kuwo onke amajelo, hayi inye kuphela. Siye sabhala malunga nokufika kwe Umabonwakude weNtlalo, kodwa iimodeli zentengiso ezijikeleze umabonwakude wemveli ziyatshintsha ngokunjalo, kubandakanya usetyenziso, itekhnoloji yeselfowuni kunye nemidiya yoluntu. Le yividiyo enkulu evela I-BBR / Saatchi kunye neSaatchi Ukuchaza intengiso emanyanisiweyo.
tags: intengisozidibeneyointengiso ehlanganisiweyo
Ividiyo: Yeyona iPhone inde ngoku
I-SteelHouse A2: Intengiso yeQonga eliSebenzayo